8 Tsy maintsy mitsidika ny vondrom-piarahamonina Singapore
Ireo faritra 8 mila ilainao any Singapore
Ny fiandrasana manodidina ny zorony rehetra ao Singapore dia zava-baovao iray; zavatra tsy mitovy amin'ny farany amin'ny endrika sakafo, kolontsaina, fividianana, tantara ary ny natiora. Ity, amin'ny ampahany, noho ny vondron'ny tanàna isan-karazany, manolotra zavatra ho an'ny karazan'olona rehetra, na miditra mividy mandra-pialanao ianao, hijery ny tantaran'ny firenen'ny nosy, na mitsambikina any an-tanàna malaza . Toa tsy dia misy dikany loatra izany, i Singapore dia mitazam-pandresena amin'ny toerana mahavariana. Na mitsidika andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy ianao, eto dia valo amin'ireo tanàna tsara indrindra any Singapore mila jerena.
Getty Images / Christian Kober
Ny mozika mahavariana ny antitra sy ny vaovao dia manome fitsidihana ireo mpitsidika an'i Chinatown mikolokolo an'i Singapour, toeram-ponenana ho an'ny sakafo, mpividy ary tantara an-tsehatra. Manomboka amin'ny Ivontoerana Heritage Chinatown mba hianatra bebe kokoa momba ny kolontsaina Shinoa ary hijery ny fomba niainan'ny mpifindra monina Shinoa tany Singapore indray mandeha. Ny sakafo dia haniry ny hitondra ny filany amin'ny Chinatown Food Street (CFS) eo amin'ny Street Smith, izay ahafahanao misafidy amin'ny toerana sy trano fisakafoanana marobe. Na jereo ny foiben'ny Maxwell Road Hawker eo akaiky, iray amin'ireo toeram-piompiana tranainy indrindra sy lehibe indrindra ao Singapour ary any an-tokantranom-pisiana matsiro.
Getty Images / Andrew Watson
Misaotra ny mpividy; Orchard Road no fividianana farany sy mividy toerana any Singapore, fantatry ny toeram-pivarotana avo lenta sy tranobongo marevaka izay mpividy entana, ity no tsena malaza indrindra any Azia. Azo alaina amin'ny toeram-piantsonan'ny MRT telo ny Orchard Road, ka anisan'izany ireo ivontoeram-pivarotana lehibe ao amin'ny orkide 20, anisan'izany ny ION Orchard, futuristic, miaraka amin'ny bozaka, ny fasika sy ny marbra ary ny valo valo amin'ny fivarotana ary ny ION Sky Observatory izay manolotra Instagram 360 -Tena-hevitra momba ny distrika etsy ambany. Raha mangetaheta ianao, ny tranombarotra eto dia manana safidy sakafo maro, maro amin'izy ireo no sarobidy kokoa noho ny mety eritreretinao miorina amin'ny marika manodidina anao mibaliaka eo aminao.
Tom Lau / Getty Images
Mivonona hahita an'i Singapore amin'ny hazavana vaovao iray manontolo miaraka amin'ny fitsidihana ny tanànan'i Little India vohitra malaza. Ny faritra manan-tantara eo an-dalambe Serangoon sy ny araben'ny tanàna dia ny fo ao amin'ny fiarahamonina Indiana ao Singapore ary toerana tsara hiorenana ho an'ny trano fonenana sy sakafo mahavelona. Rehefa mandinika anao ianao dia ho tonga any amin'ny Tempolin'i Sri Veeramakaliamman, iray amin'ireo tempolin'i Hindu tranainy indrindra any Singapore; Fivarotana 24 ora amin'ny fivoaran'ny Mustafa Center; Toeram-pitrandrahana Tekka Centre; ary sakafo ara-pahasalamana mahazatra amin'ny sakafo indianina amin'ny vidin-tsolika.
Tiong Bahru dia manavaka ny maha-iray amin'ireo faritra manodidina an'i Singapore, izay miharihary raha vantany vao manomboka manadihady ianao. Anisan'ny tanàna tranainy indrindra ao an-tanàna ihany koa izy io, izay manome ny endriny manan-tantara sy maoderina. Mandania fotoana kely hijerena ireo zavatra tsy ampoizina mitranga eny an-dalàmben'i Tiong Bahru satria tsy fantatrao izay mety hitranga aminao, na dia kafe, na zavakanto kanto na boutique mahaleotena aza. Ao afovoan-tanàna ihany koa dia hahita ny Tiong Bahru Market, toeram-pivarotana goavana sy toeram-pivarotan-tsakafo, izay mametraka toerana tsara mba hamenoana ny sakafo eo an-toerana toy ny chwee kueh (voatabia masira voatahiry miaraka amina rady voatahiry).
Mandrakizay ao amin'ny Instant / Getty Images
Ny fifangaroana, ny fikarakarana sy ny fibobohan-toaka, ny faritra manodidina an'i Marina Bay ao Singapour dia tsy mahavita mandanjalanja na oviana na oviana rehefa mandany fotoana any amin'ny faritra mampientanentana. Iray amin'ireo trano mendri-piderana indrindra eto dia ny Marina Bay Sands. Tsy trano fandraisam-bahiny fotsiny io trano io, fa ao an-tokantrano ihany koa ny iray amin'ireo dobo lehibe lehibe indrindra eran-tany (tsy misy afa-tsy ireo trano fandraisam-bahiny, indrisy), ny fivarotana lozisialy, ary ny Museum ArtScience. Ao amin'ny faritra ihany koa ireo saha marobe amin'ny Bay, zavatra tsy tokony hotsaroana noho ireo zaridaina avo indrindra misy hazo avo be izay misy eo anelanelan'ny sivy sy 16 tantara. Marina Bay koa dia tranon'ny tsenan'ny sakafo malaza Lau Pa Sat (manokatra 24 ora isan'andro), ary ny Merlion Park malaza.
Raha mahafinaritra, fialam-boly ary fialamboly mitady anao amin'ny dia mankany Singapour, dia ho hitanao ao amin'ny nosin'i Sentosa. Ny nosy dia 15 minitra miala ny foibe ao an-tanàna amin'ny alàlan'ny fiarandalamby madinidinika avy ao VivoCity na fiara mandeha amin'ny lakandranon'i Canavour avy ao Harbourfront. Fantatra amin'ny "State of Fun", ny nosy Sentosa dia trano fonenana fasika fasika volamena telo, ny atidoha lohahevitra toy ny Mega Adventure Park (tranon'ireo zipo indrindra amin'ny tendron'i Azia Atsimo-Atsinanana) ary Adventure Cove Water Park, kianja golf, spa, trano fisakafoanana sy fandehanana an-dalamby. Mazava ho azy fa tsy ho menatra ianao ao amin'ny nosin'i Sentosa.
Getty Images / Lonely Planet
Tany am-piandohana, tamin'ny taona 1850, ary namboarina ho tobim-piadiana miaramila, Dempsey Hill dia vitsy an'isa monina lavitra raha ampitahaina amin'ny faritra hafa malaza toa an'i Chinatown na Marina Bay, saingy tsy mahaliana izany. Raha ny marina dia ampy ny mahita, mihinana ary manao eto fa afaka mandany fitsangantsanganana mandritra ny faran'ny herinandro ianao. Dempsey Hill dia mipetraka minitra vitsy miala ny fividianana mekka any amin'ny Road Orchard, saingy manome zavatra iray faran'izay kely kokoa izy io, nipitipitika tao anatin'ireo tanimbilona mangatsiatsiaka. Tsidiho ny fivarotana antikny sy boutique kely mivarotra zavatra mety tsy hitanao any an-kafa. Jereo ny sasantsasany amin'ireo lalana an-dalamby mba hahatsapa tena ho an'ny faritra. Eo akaikin'ny Dempsey Hill dia hahita ny Botanical Garden ao Singapore, maitso oasis iray ao an-tanàna ary tsara ny manefa ora roa. Ny fidirana ao amin'ny Zaridainan'ny Botanic dia afaka amin'ny faritra rehetra an-jaridaina afa-tsy ny Zaridaina National Orchid.
Fantatra amin'ny toerana nahaterahan'i Singapore ankehitriny, ny faritra avaratry ny Reniranon'i Singapore sy ny ao amin'ny City Hall ary ny toeram-piaramanidin'ny MRT Dhoby Ghaut dia manankarena amin'ny sasany amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra ao an-tanàna. Eto dia hahita ricky Raffles Hotel ianao (hijanona ao Singapore Sling), ny National Museum of Singapore, ny Museum of Civilizations Ao Azia, ny Fort Canning Park ary ny Art Museum of Singapore (izay ahitana ny karazana lehibe indrindra eran-tany indrindra any Azia atsimo atsinanan'i Azia) Hevi-dehibe marim-pototra. Misy hotely maromaro, ary ny Victoria Theater sy Concert Hall izay naorina tamin'ny 1862, Esplanade - Theaters on the Bay, ary ny Suntec City (iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny toeram-pivarotana lehibe any Singapore.).
Ny Krizin'ny Krismasy sy ny Taombaovao any Singapour
Krismasy any amin'ny Tropika - Fe-potoana Krismasy mandritra ny enim-bolana any Singapore
Ahoana ny fiovana sy fampiasana vola any Singapore
Torolalana vetivety amin'ny fivarotana any Singapore
Ny Ethnic Enclaves any Singapore
Zavatra tsy tokony hatao any ivelan'ny Season any Hamptons
Torolalana ho an'ny Restaurants Old Town Albuquerque
24 ora ao Las Vegas
Iza amin'ireto nosy ireto no tsara indrindra aminao?
RV Camping ao Yosemite: Ny zavatra tokony ho fantatrao
Gorilla Safaris any Afrika
Foz Côa | Torolàlana momba ny fitsidihana ny valan-javaboahary any Portogaly
Ny Torolalana ho an'ny Big 2016 Phoenix Thanksgiving
Lisitry ny lisitry ny bokotra: septambra tao Budapest
Finding the Thermos Thermos for Backpacking
Fomba ahoana no hanalavirana ny fialan-tsasatra amin'ny hotely
Ny Dia Trip to Delhi: Ny Torolalana Manonona
Manana vola ve ny andro fitsangatsanganana amin'ny London?
Fialan-tsasatry ny vakansy any Texas